Mujaahidiinta Al-qaacidah Oo Weerar Khasaara Xoogan Dhaliyay Ka Fuliyay Dalka Maali. – Bogga Calamada.com
Mujaahidiinta Al-qaacidah Oo Weerar Khasaara Xoogan Dhaliyay Ka Fuliyay Dalka Maali.
Wararka ka imaanayo wadanka Maali ayaa sheegaya in weerar xoogan lagu qaaday Saldhig ay leeyihiin ciidamda isbahaysiga dowladaha Saaxilka ee G5 loo yaqaano ee ku duulay dalka Maali.
Weerarka ayaa lala beegsaday xarunta ugu weyn ee isbaheysigan uu ku leeyahay gudaha dalka Maali taasi oo ku taala Magaalada Sivari oo dhacda Bartamaha wadankaasi, waxaana lagu dilay askar tiro ah, sidoo kalena waxaa lagu burburiyey qeybo kamid ah dhismihii saldhiga.
Howl galka oo ahaa mid qorsheysan ayaa ku bilowday Camaliyad Istish-haadiya ah oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo lagu dhuftay Albaabka hore ee xarunta, kaas oo ufududeeyey ragii weerarka ahaa inay howshoodu u fuliyaan sidii loo qorsheeyey.
Warbaahinta ayaa sheegtay in howl galkan ay ku dhinteen Lix askari oo ka tirsan isbaheysiga G5 oo ay ku mideysan yihiin dowladaha, Niger, Chad, Burkina Faso, Mauritania iyo Maali.
Dadka deegaanka ayaa kusoo waramaya in Saldhiga isbaheysiga uu la kulmay khasaare xoogan kadib markii gaariga lagu qarxiyey, sidoo kalena lagu garaacay Gantaalo, taas oo ay sii dheer tahay iska hor imaad ka dhacay gudaha saldhiga oo dhex maray ragii goobta soo weeraray iyo ciidankii xerada ku sugnaay.
Dagaalka ayaa intii uu socday waxaa laysku adeegsaday hubka qeybahiisa kala duwan, waxaana lagusoo waramayaa in ragii goobta soo weerary goor danbe ay isaga bexeen magaalada.
Weerarkan ayaa ah kii ugu horeeyey uguna xoogana oo ay lakulanto xarunta isbaheysiga dowladaha Saaxilka ee qeybta ka ah dagaalka Islaam la dirirka ah ee Faransiisku uu hor boodaayo, isbaheysigaas oo la dhisay Sanadkii 2017.
Sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa laga arki karaa burbur xoogan oo soo gaaray saldhiga, god weyn oo ka qodmay goobta uu gaarigu ku qarxay, gaadiid gubtay iyo dhiig badan oo dhulka ku daadsan.
Sarkaal katirsan ciidanka MINUSMA ee hoos taga waxa loogu yeero qaramada midoobe oo ku sugan magaalada Savari ayaa warbaahinta u sheegay in weerarka lagu qaaday Saldhiga KAAIN uu ahaa mid aad u qorsheysan, ayna suur tagal tahay inuu jiro khasaare xoogan oo soo gaaray ciidanka saaxibadooda ah ee xarunta ku sugnaa.
Jamaacada Nusratul Islaam Wal Muslimiin oo ah faraca Mujaahidiinta Alqaacidah ee wadanka Maali ayaa sheegatay masuuliyada weerarkan, waxa ayna sheegtay in tiro yar oo kamid ah ciidankeeda ay fuliyeen howl galkan, hadafkii laga lahaana laga gaaray.
Dowlada Faransiiska ayaa maal geliso isbaheysiga G5, waxa uuna ka cabanayaa dhaqaale xumo baahsan oo heysata, inkastoo ay jiraan lacago gaaraya 420 Milyan oo Euro oo horey loogu balan qaaday, lacagtaas oo ay sii dheertahay 100 Milyan oo doollar oo Sucuudigu u balan qaaday iyo 30 milyan oo dowlada Imaaraatka ay u balan qaaday isbaheysigan.
Saddex maalin kadib ayaa la qorsheynayaa in kulan uu ka dhoco magaalada Nawakshod oo ah caasimada dalka Mauritania, kulankaas oo la filaayo inay ka qeyb qaataan madaxweynaha dalka Faransiiska iyo madaxweynayaasha dowladaha ku bohoobay isbaheysiga G5, si ay uga wada hadlaan dagaalka Islaam la dirirka ah ee ay kaga jiraan Mandiqada Saaxilka ee galbeedka Qaarada Africa.
Weerarkan ayaa kusoo aadaya xilli wadanka Maali laga qorsheynayo dhamaadka Bishan inay ka bilaabato doorashada madaxtinimada wadankaasi, waxaana sii xoogeysanaya weerarada ay fulinayaan Mujaahidiinta Alqaacida ee halkaasi ka dagaalama.